Noma yimuphi umthengi efuna ukuthenga laptop ezishibhile amageyimu nokuzijabulisa, uyazi ukuthi ukuze umuntu athole idivayisi ehloniphekile mobile elihlangabezana nazo zonke izidingo, kuba cishe kungenakwenzeka. Iqiniso lokuthi igajethi umdlalo nje akukwazi ezishibhile. Nokho, kukhona isixazululo, omunye abakhiqizi bodumo esikunika isixazululo ezithakazelisayo emakethe range intengo "20 000", elikwaziyo ukuhlangabezana abathengi abaningi ezingaba khona.
Kulesi sihloko sizogxila laptop evamile Asus K53TK. Okungenani, idivayisi ezivamile ezama ukubeka inkampani-umakhi, egxile umkhiqizo wawo ekilasini isabelomali. Eqinisweni, idivayisi yeselula uyakwazi ngokukhululekile ancintisane zikagesi ezibizayo, abathi babe laptop eshibhe isigaba amageyimu.
Ingxenye kwetindlu letibita kancane ubuchwepheshe
Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi notebook Asus K53TK Ukucaciswa afaneleka kahle hhayi kuphela ukugijima amathoyizi elikhiqizayo, kodwa futhi ukuze uthole izicelo ukusebenza eligcwele medium and ongaphakeme izilungiselelo izinga. Nokho, kukhona izinto eziningi ungayeka umthengi ezingaba khona. Okokuqala, wonke amadivaysi mobile kulolu chungechunge zisekelwe AMD A70M chip. Abathandi ukwazi ukuthi isilawuli akusebenzi futhi isekela zonke izilimi ku ongaphakeme imvamisa uhla - 1500-2400 MHz.
Futhi, i-laptop ifakwe omdala-15 intshi-matrix, sekuyisikhathi eside okuyinto kube out of umkhiqizo ngenxa ukungalandelani izindinganiso onikezwe yokuhumusha umbala. Nokho, Asus Corporation wanquma ukuthi uchungechunge lezi kumadivayisi eselula kufanele inikezwe ngokunembile lesi sikrini.
Kuyatholakala ku-izindleko emakethe ye-laptop ubophekile futhi uhlelo lokusebenza, okuyinto ifakwe laptop: DOS, Windows 7 Kuqalwe noma Ikhaya - imikhiqizo eshibhe okuyinto kusadingeka ukushintshelwa isiteji yesimanje-Windows 10.
Ukuze kuhlangatshezwane notebook Ukucaciswa ikhasimende ukusebenza Asus K53TK, umenzi wanquma ngisindise kuyo yonke into. Zibuthuntu grey emaphaketheni amakhadibhodi eliqinile le ukhiqiza lutho ezithakazelisayo ngaphakathi idivayisi yeselula ukuthi. It is kuphela ngemva kokutadisha ngokucophelela, ungakwazi ukuthola ngesandla okwenziwe uthathelwe omunye amabhokisi ukubonisa, ngalokwanele sifana laptop.
Akubalulekile ukuba nethemba lokuthi nomkhiqizi ukhathazwa ukukha. Nokho, ukubukeza, abanikazi abaningi abathi ukuthi ngaphakathi kwebhokisi konke kuyadingeka ukuze sizuze umsebenzisi: laptop, ibhethri, ishaja imiyalelo. Njengoba umkhuba ubonisa, lena ngempela anele abathengi kakhulu ubani nje kudingeka igajethi, hhayi izesekeli.
Ukubukeka kanye Ergonomics
Yebo, isitayela wesimanje, ubuhle kanye lightness kungaba kungabaza. Kunalokho, ukubukeka notebook Asus K53TK kungabangela umuzwa wokuthi kudivayisi sidalwe ekuqaleni ngekhulu xxi. Nokho, ukubukeka ngokuvamile kakhulu edukisayo.
Qala nge Ergonomics kangcono. Bamba ezandleni zabo, ukuthutha futhi ukusebenzisa idivayisi yeselula Ukugunda. Ngisho ubambe laptop ngeminwe emibili, umsebenzisi akudingeki sikhathazeke ngokuthi inqubo ukushelela esandleni. A semali laptop, njengoba kuvela, inika plastic obukhulu, okuyinto futhi ingaphezu futhi iqine. Ngesikhathi kokuhlinzwa, umnikazi akasoze uzwe kusukela laptop imihuzuko noma ezinye imisindo nezingahlobene nendaba. Kukhona kuphela yesimangalo kuya kokuhlanganisayo, ugcine lid - zingabantu okunzima kakhulu. Vula i-laptop ne ngesandla esisodwa akunakwenzeka. Ngakolunye uhlangothi, rigidity ivumela umsebenzisi ukuze usethe isibonisi ngasiphi angle.
Izimfanelo okucaciswe luketshezi
Asikho isidingo uphatheke kabi labo abangase babe abathengi, uthole ukuthi yini laptop Asus K53TK has ukhwaliti ongaphakeme-matrix. Phela, yilo isici ivumela umsebenzisi kakhulu ulondoloze imali ukuthenga kugembula idivayisi yeselula. Pyatnadtsatidyuymovy sikrini isinqumo 1366 x 768 amachashazi intshi ngamunye esibanzi. Yebo, ukubukela amabhayisikobho in high kwi laptop ungakhululekile, kodwa kulezi zici kukhona kahle ngokwanele emsebenzini, phezu Internet noma ukudlala imidlalo.
Ukuze uthuthukise nomkhiqizi umbala-matrix ifakwe LED-backlit isibonisi. Nokho, umsebenzi wabo-ke ubhekana ngenhlonipho, enenkinga engeli wokubuka. Ngokuqondene black ephelele ke umsebenzisi ulindela ukuphoxeka lapha. Nge ompungana kuleli matrix zikhona izinkinga ezinkulu. Angiyithandile ochwepheshe kanye ecwebezelayo isikrini enamathela. Ngo ukukhanya okukhulu (ikakhulukazi sezulu sunny emgwaqeni), isibonisi ukukhanya egcwele.
Asus K53TK isabelomali laptop, intengo okuyinto ku ekupha ama-ruble ayizigidi 20, ifakwe ikhibhodi enkulu eziyokhanga ngisho ikhasimende olindele kunazo. Okokuqala, iphaneli ngokwayo - kuthatha wonke ububanzi idivayisi yeselula engashiyanga isikhala khulula ezinhlangothini. Zonke okhiye ahlukene ikhibhodi iyunithi, ngaphandle umsebenzisi ngengozi kucindezelwa ngesikhathi abhale asheshise. On ikhibhodi elikhulu kangaka kwakukhona lapho indawo kanye block digital. Muhle a big, ukhululekile futhi zisebenza kahle.
Njengoba ukuze kube lula, lapha umyalelo egcwele. Stroke izinkinobho ezinkulu, kodwa ebucayi, njengoba nabo ngokwabo ezinokucwasa okhiye une-ukubuya kakhulu emunweni. Izinsuku zokuqala yokusetshenziswa kumnikazi, osebenza esiningi umbhalo, kuyodingeka usuyijwayele, kusukela izinkinobho empeleni eyayigcwele kalula.
Njengomhlaba umthengi iphedi. Yena, njengo ikhibhodi iyunithi, esikhulu ukhululekile ngokwanele. Umkhiqizi, ngokusobala, wanquma ukuba banake afanele Ergonomics ye notebook Asus K53TK. Izibuyekezo abanikazi zithi umsebenzi nge idivayisi yeselula sizikhandle. Iphedi isekela ukufaka ngokuthinta umsebenzi. It ivumela oyisebenzisayo hhayi kuphela ukuphatha esikalini bese uphendukisa izinto, futhi sisebenze imisebenzi eminingi. Ngokwesibonelo, ukulawula notebook esebenzisa ukuthinta (isebenza kuphela nge-operating system Windows 10).
Iphedi kancane lalihlehliswa emzimbeni plastic idivayisi yeselula. Leli lungiselelo akuvumeli isithupha okungaphezu umngcele site. Amajaji has a ebusweni matt futhi ifakwe izinkinobho ezimbili lokukhanda. Yebo, ekuqaleni, lezi izinkinobho kungaba ecasulayo oyisebenzisayo ukuchofoza elikhulu uma ucindezela, kodwa esikhathini esizayo umsebenzisi ngeke baqonde ukuthi lo msindo kwenza kube nokwenzeka ukulawula isinyathelo, ekuqedeni isipoki cindezela.
Njengoba kushiwo ekuqaleni kwalesi sihloko, umbadlana Asus K53TK uchungechunge notebook esekelwe chip AMD A70M. Lokhu isilawuli igcina izindleko zonke izilimi kanye cores ezimbili noma ezine liyanda esingaphansi 65 Watts kwamandla kagesi. Lovers-olunzulu imidlalo Yiqiniso, kudingeka sigxile multi-core amapulatifomu nge esiphezulu iwashi imvamisa ukuhlangabezana nezidingo zabo ukuze uthole ukusebenza.
Ingxenye ebalulekile kunoma iyiphi iplatifomu imidlalo ikhadi vidiyo. chip aboshelwe ngezinye kwesisekelo salo oludidiyelwe ihluzo namafutha Radeon HD 6520G. Ngaphezu kwalokho, umenzi ifakwe idivayisi yeselula futhi ngokuqhubekayo ihluzo ikhadi HD 7670M. Lapha uqala fun okuyingxenye - ihluzo amakhadi amabili bayakwazi ukusebenza kwimodi Crossfire, okusho ukuthi i-laptop amageyimu bezikhali inyuka kakhulu. Kusahlaziywa yakhe, lokhu Ngohlelo abasebenzisi eziningi kuqhathaniswa ne notorious amageyimu isixazululo Radeon HD 6800M. Futhi abasesigabeni esiphakathi ezimakethe amadivayisi okudlala.
link buthakathaka yochungechunge olufanayo
Ake sithi kushiwo ngumkhiqizi we laptop ukwesekwa 8 GB we-RAM, kodwa umthengi emakethe akunakwenzeka ukuthola idivayisi ivolumu enjalo. Maximum - 4-igigabhaythi (ezimbili imicu 2 GB). Ukuze uthuthukise ukusebenza yesikhulumi umsebenzisi kuyodingeka ukuthenga amamojuli inkumbulo futhi ufake nabo bebodwa ku Asus K53TK laptop. Izimpawu ibhasi idatha kukhawulwe ngesivinini 1333 MHz, ngakho umsebenzisi kudingeka aqiniseke ukuthi modules uthenge bayoba nedivayisi yakho ephathekayo.
Kukhona futhi imibuzo kusistimu yefayela. Ikhompyutha ephathekayo igibele magnetic hard disk 500 igigabhaythi umthamo, ezisebenza ubuchwepheshe Sata III ngesivinini esingafinyelela ku-5400 ngomzuzu. abadlala noma kunjalo kuyodingeka athengwe ngokwehlukana superfast SSD-drive bese uyifake ohlelweni.
Izimbobo kanye interface
Umzimba ezinkulu futhi ivulekile kwakukhona indawo ephezulu grade optical drive DVD-RW, futhi kujabulisa, kusukela imidlalo ilayisensi kakhulu namanje ukufakwa kusuka kudiski. Umenzi drive aye wayibekela ekupheleni kwesokudla notebook. Eduze kwalo kukhona inguqulo ye-USB port 2.0 terminals uxhumano ekhadini alalelwayo (microphone kanye ama-headphone).
Ngakolunye uhlangothi umsebenzisi kudivayisi uzothola omunye USB 2.0 imbobo. Eduze kwalo kukhona yesimanje esibonakalayo-USB 3.0-HDMI futhi VGA isiqophi okukhiphayo. Kuwufanele ngincome umkhiqizi, okuyinto namanje ukuvumela umsebenzisi sekudingeka ukhethe, iyiphi ukuxhunyaniswa (i-analog noma idivayisi digital). Futhi phezu RJ-45 Isixhumi likhona ekupheleni kwesokunxele laptop ukuxhuma kunethiwekhi bese esibonakalayo for ukushaja ibhethri. Umhlane phambi idivayisi Awunawo nezimbobo. Futhi kuyamjabulisa, ngoba laptop Asus K53TK, izici evumela abasebenzisi abaningi ukudlala imidlalo isisetshenziswa khudlwana, ungafaka kuphi:
ukubeka odongeni ukuze wonge isikhala etafuleni;
ukuthatha embhedeni ukuze ujabulele umdlalo endaweni ekahle;
ukubeka kuyi-dashboard yemoto.
ubuchwepheshe obungenawaya be-
Standard-Wi-Fi module akusona isimanga, ngoba isici igunya for iyiphi idivayisi yeselula. I-Asus K53TK SX023R notebook ifakwe isilawuli ejwayelekile esekela 802.11 BGN ubuchwepheshe futhi isebenza ngayo yonke izinhlobo ezaziwayo zama-ukubethela. By the way, idivayisi kungaba Nokho asebenze njengomxhumanisi yokufinyelela (siyalahla-Wi-Fi), ngoba lokhu umnikazi kudingeka xhuma i-laptop yakho kwi-Inthanethi nge ikhebula inethiwekhi.
Kodwa kwidivaysi ye-Bluetooth unemibuzo. ubuchwepheshe Obsolete software version 3.0 has inombolo yezinkinga ezihambisana ukudluliswa kwedatha. Kumayelana amaphutha okukhulumisana ezimweni lapho umsebenzisi isebenzisa 3G / EDGE imodemu, a exhunywe-Bluetooth isixhumanisi engenantambo. Kodwa umsindo multimedia yokudlulisela imibuzo ebuzwa. ukuzijabulisa kokuqukethwe usebenza ngaphandle izikhalazo evela kubanikazi bako.
Ukuze umnikazi idivayisi yeselula Asus K53TK kwazo laptop kungaba abe ukuhlushwa, ngoba umakhi "wazama" ukubeka izingxenye eyisisekelo ohlelweni ukupholisa futhi ngangokunokwenzeka kusuka umsebenzisi. Lapha ngaphandle kosizo ochwepheshe nje ungenzi esikhungweni sesevisi. Nokho, kukhona izingcweti abafisa ugcine on yokuhlanza kanye uqaqe laptop wena. Ezimweni eziningi, ukuqoqa idivayisi yeselula ku oda reverse kuphela ophethe amayunithi, lonke Awekho-ebucayini setha izingxenye isikhungo service.
Njengoba umkhuba ubonisa, Asus K53TK laptop has a izindleko ngendlela efanele. Phela, kanye ukusebenza kahle eliphezulu futhi ine izici eziningi ezingezinhle ukuthi ungayeka umthengi ezingaba ozazisayo ngokuyinhloko Ergonomics. Kwekhwalithi eliphansi ukubonisa, isidingo ngcono olwengeziwe (kwenyuke wememori kanye ukuthengwa SSD) nezinkinga inkonzo zidinga ngokucacile umnikazi we izindleko ezengeziwe zezimali.
I-Laptop ASUS K53U: Ukucaciswa
Indlela esiphatha ngayo ukhunta on izinzipho imilenze: Izindlela ezihlukile
Zokupheka Ngempumelelo emithi yesintu. amadevu Golden: tincture, zezinkambi kanye isicelo sabo
Izingxenye zenduku yomgogodla. Imisebenzi yomthambo womgogodla
Angabonelela needlewomen: cross Stitch scheme "endlini"; wesifunda eyakhelwe siqu
Umgudu wokuvakasha uzokwenzela izimo ezikhululekile
Pan wokushiswa. Indlela ukuhlanza? Sifuna ngendlela ephephile